Iphupha eliNtsha leNtsholongwane? I-WTN Ibiza iSigunyaziso seHlabathi sokugonya kunye nokuLingana kuSabelo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » I-WTN » Iphupha eliNtsha leNtsholongwane? I-WTN Ibiza iSigunyaziso seHlabathi sokugonya kunye nokuLingana kuSabelo
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeMpilo • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • I-WTN
UMzantsi Afrika ukwimeko yomothuko nomsindo emva kokubhaqwa kohlobo lwe-Omicron ye-coronavirus.
Ngokuhlwa, umzi-mveliso wokuhamba kunye nokhenketho ujonge ukukhanya okuqaqambileyo ekupheleni kwetonela, wabuyela kwixesha lobumnyama kunye nokuvalwa kwemida, ukurhoxiswa kweenqwelomoya, kunye nentsholongwane engaziwayo esongela impilo yoluntu kunye neendlela zokuphila.
Namhlanje, umhlaba ujongene nenye ingxaki yezempilo yoluntu ngokubhaqwa kweyona nto incinci eyaziwayo kodwa enokosulela kakhulu kwaye iyingozi ngakumbi ye-Omicron ye-coronavirus. Olu hlobo luqale eMzantsi Afrika, kwaye lufunyenwe kwimeko ekwanti eHong Kong naseBelgium.
Umyinge wama-23.8% wabemi boMzantsi Afrika ugonywe ngokupheleleyo, kwaye kwiindawo ezininzi zase-Afrika, eli nani likwidijithi enye kuphela, akukho logonyo lwaneleyo olufumanekayo.
Ukhenketho ludinga umanyano lwehlabathi ngoku kunanini na ngaphambili apho amazwe anceda amazwe angoogxa bawo.
UGqr. Peter Tarlow, uMongameli we-WTN, ukhumbuza umhlaba ukuba zonke izizwe zabelana ngesi sijikelezi-langa sincinci kwaye kufuneka sisebenzisane ukuphelisa i-COVID-19 kuyo yonke indawo emhlabeni.
Ukulwa ne-COVID ayingomsebenzi walo naliphi na ilizwe elinye, kodwa kuwo onke amazwe kunye nemimandla esebenza kunye ngempilo kunye nehlabathi elinoxolo.
USihlalo we-WTN uJuergen Steinmetz wongeze wathi: “Ukusasazwa ngokulinganayo kwezitofu zokugonya kuwo onke amazwe kubalulekile. Masikhumbuze ihlabathi: Akukho mntu ukhuselekile de wonke umntu agonywe!”
Oku bekwaziwa kwasekuqaleni xa uMongameli wase-US u-Biden wathi emva nje kokumiselwa kwakhe, Akukho mntu ukhuselekile de wonke umntu ukhuselekile.
Ngokungalandeli imithetho yenzululwazi, iintlobo ezininzi ezingaphaya kolawulo lwentsholongwane ezifana ne-Omicron strain zinokukhula ngokulula. Ukwahluka okunjalo ngenye imini kunokuphepha ukhuseleko lwethu lwangoku lwesitofu, kunyanzelise umhlaba ukuba uqale lonke.
Lo ngumngcipheko uluntu olungenako kwaye akufuneki luqhubeke.
Ngokukodwa, kumazwe apho isitofu sokugonya singafumaneki khona, isoyikiso sokubangela imeko enje ngamaphupha iphezulu.
Imeko esakhulayo eMzantsi Afrika ngoku yahlula amazwe asi-8 ngobusuku kuhambo lwamazwe ngamazwe kunye nokhenketho kwaye iphazamisa uqoqosho. Oku kufanele ukuba kusivuse sonke.
Ukuvala nje imida phakathi kwamazwe sisisombululo sexesha elifutshane kakhulu. Eli hlabathi linxibelelene, kwaye intsholongwane ayiyihloniphi imida. Isitshixo esaziwayo eluntwini ngeli xesha sisitofu sokugonya.
Oku kuquka usasazo olubanzi nolugqibeleleyo oluqinisekileyo kuyo yonke indawo, ngaphandle kwenzuzo yemali okanye izithintelo, ukuma kwezopolitiko, kunye nezinye izizathu zasemhlabeni.
The Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi kwakhona ifuna ukunyenyiswa kwemigaqo yelungelo elilodwa lomenzi wechiza kunye nezivumelwano zamazwe ngamazwe ukuqinisekisa ukufumaneka okubanzi nokupheleleyo kwesitofu sokugonya esisebenzayo kuyo yonke indawo.
Cuthbert Ncube, uSihlalo weBhodi yezoKhenketho e-Afrika
I-World Tourism Network, njengeqabane eliphambili le IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika (ATB), unovelwano ngabantu baseMazantsi e-Afrika, ingakumbi kubahlobo nakumalungu akwishishini lezohambo nokhenketho.
USihlalo we-ATB uCuthbert Ncube uye wathetha phandle kwimiba yokusasazwa ngokulinganayo kwesitofu sokugonya kunye nokunyenyiselwa kweemfuno zelungelo elilodwa lomenzi wechiza ukuququzelela oku.
Le meko ithatha ubunkokeli obunobuzaza obungaphaya kokhenketho, kwaye sonke kufuneka sityhale kwaye sixhase naliphi na inyathelo eliqinisekisa le njongo yomntu yokufumaneka kwesitofu sokugonya.
Ubunkokeli obusebenzayo obungenabugovu kwi-UNWTO, i-WHO, koorhulumente, nakumashishini abalulekileyo kubaluleke kakhulu kunanini na namhlanje.
I-WTN iyasixhasa isigunyaziso sesitofu sokugonya ukuba siyaxhaswa ngabaPhathi beSayensi kunye nezeMpilo, kunye nabo banako ukufumana isitofu ngokukhuselekileyo.
Ngakumbi kwiWorld Tourism Network kunye nobulungu: www.wtn.travel